Ben White Waa Kuma? Muxuuse Saxiixa Cusub Kusoo Kordhin Karaa Arsenal? – Garsoore Sports
Ben White Waa…
Ben White Waa Kuma? Muxuuse Saxiixa Cusub Kusoo Kordhin Karaa Arsenal?
Arsenal ayaa bixisay 50 milyan oo ginni iyadoo heshiis shan sano ah kala saxiixatay daaficii Brighton ee Ben White waxaana ciyaaryahanka lagu dhawaaqay inuu yahay ciyaaryahan Arsenal ah, isagoo xiran doona lambarka afaraad ee Gunners.
White waa ciyaartoy awood u leh inuu si weyn u hagaajiyo difaaca Arsenal oo dib ugu soo celiyo kubbadda cagta Champions League. Kaddib olole niyad jab leh oo sababtay in Arsenal ay ka harto kubbadda cagta Yurub markii ugu horreysay muddo 25 sano ah, saxiixa ciyaartoy heerkiisu yahay White oo lagu bixiyay 50 milyan oo ginni ayaa noqon doona mid ujeeddo dhab ah ay ka leedahay kooxda Waqooyiga London.
Waxaa laga sii daayay Southampton waxaana soo qaadatay Brighton sannadkii 2014, White wuxuu amaah ku qaatay Newport County, Peterborough United iyo, gaar ahaan, Leeds United, isagoo ka caawiyay kooxda Marcelo Bielsa inay usoo dalacdo Premier League-ga ololihii 2019/20 kaddib lix iyo toban sano ka maqnaanshaha qeybta sare.
Kaddib amaah cajiib ah oo uu ku qaatay Elland Road, kooxda reer Yorkshire ayaa dooneysay inay heshiiskiisa joogto ka dhigto 12 bilood kahor. In kasta oo ay u soo bandhigtay saddex dalab, iyadoo dalabkii ugu dambeeyay la rumeysan yahay inuu ahaa dalab gaaraya £ 25 milyan, kooxda Marcelo Bielsa ma aysan awoodin inay xiddigan ku abaalmariso meel ka baxsan garoonka Amex ee kooxda lahayd milkiyaddiisa ee Brighton.
Intaa kaddib, White wuxuu ku raaxeystay xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay ee cajiibka ahaa ee Premier League intii uu ka hoos shaqeynayay macalinkii Brighton ee Graham Potter, isagoo kusoo baxay kooxda 1aad ee Amex Stadium wuxuuna caddeeyay inuu yahay mid kamid ah kuwa ug bandhigga sarreeya ee kooxda ololihii 2020-21.
Wuxuu 39 kulan u saftay Brighton tartamada oo dhan xilli ciyaareedkii hore, isagoo kooxdiisa ka caawiyay inay shabaqeeda ilaashato 12 kulan oo Premier League ah, qaab ciyaareedkiisii fiicnaa ayaa ka dhigtay inuu kamid noqdo 26ka ciyaaryahan ee macalin Gareth Southgate ee Ingiriiska ku metalay ee Euro 2020, kaddib markii uu kooxda dhaawac uga baxay xiddiga Liverpool Trent Alexander-Arnold.
Kaddib olole niyad jab leh, Arteta wuxuu hadda helay waxa uu doonayay ee ah inuu helo daafac dhexe oo garabka middig ah xagaagan si uu ula mideeyo Gabriel ama Pablo Mari.
White waxaa inta badan kaga faa’iideystay Macalin Graham Potter oo ciyaarsiin jiray dhinaca middig ee saddexda dambe iyadoo garabka kale uu cayaarayo kabtan Lewis Dunk iyo halka Adam Webster uu qalxadda-dhexe ee saddex uu cayaarayay shaxda 3-4-1-2 laakiin White ayaa sidoo kale ka cayaarayay mararka qaar booska dambeedka middig oo Tariq Lamptey mararka qaar dhaawac uga maqnaa.
Intaa waxaa sii dheer, In White uu isu muujiyey inuu si isku mid ah ugu fiican yahay doorka khadka dhexe ee difaaca. Kani waa boos uu kasoo ciyaaray oo uu aad ugu fiicnaa marar badan intii uu ka ciyaarayay Bielsa iyo Potter ee Leeds iyo Brighton siday u kala horreeyaan, xilli ciyaareedyadii lasoo dhaafay, sidoo kale wuxuu booskan wacdaro ka dhigay dhawaan isagoo beddel kusoo galay intii lagu jiray ciyaartii saaxiibtinimo ee Ingiriiska ay la cayaartay Austria.
Awood-u-lahaanshaha White ayaa runtii ah wax soo jiidan doona Arteta oo si toos ah uga cayaarsiin doona afarta dambe ee shaxda Arteta uu doorbidayo ee 4-2-3-1 ama 4-3-3.
Deggenaanshaha White, isku -dheelitirnaanta, joogteynta, kartida bisil, iyo awoodaha difaaca ee xooggan ayaa la micno ah inuu caddeyn doono inuu aad uga horumarsanyahay Rob Holding iyo Calum Chambers iyadoo Gunners ay dooneyso inay xoojiso safkeeda koowaad.
Si kastaba ha ahaatee, wali ma cadda waxa imaanshaha White ee booskaas ay uga micno tahay daafac William Saliba, kaasoo labo xilli ciyaareed amaah ku qaatay tan iyo markii uu Arsenal kaga soo biiray Saint-Etienne £ 27 milyan sannadkii 2019 waxaana la saadaalinayaa inuu u dagaallami doono booskiisa kooxda.
Arsenal ma ahayn kooxda kaliya ee dooneeysa White, Manchester United iyo Liverpool ayaa sidoo kale lagu xamanayay inay xiiseynayaan saxiixa xiddiga Brighton, laakiin xawaaraha iyo xoogga Gunners ee baacsashada ayaa u muuqata inay meesha ka saartay dhammaan tartankii kooxahaas waxayna u oggolaatay inay helaan daafac tayo leh, kaasoo caddeeyay inuu awood badan u leeyahay inuu ku horumaro horyaalka Premier League-ga.
Halkan hoose ka daawo goosgooskiisa
Arnorld Oo Heshiis Cusub U Saxiixay Liverpool